Xog- Sababta ay Shabaab isaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil | Somsoon
Home WARAR Xog- Sababta ay Shabaab isaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil
Xog- Sababta ay Shabaab isaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil
Maalmihii u danbeeyay waxaa aad loo hadal hayaa kiiska Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd sirdoonka Soomaaliya, islamarkaana ay muddo kadib dowladda sheegtay in ay Shabaab dileen, hadana ay iska bari yeeleen Shabaabka.
Waxaa saraakiil ka kamid ah hey’adda ay Ikraan Tahliil ka tirsaneyd bixiyeen macluumaad ku saabsan sida ay kiiskan, gaar ahaan qaabka ay Shabaab iskaga fogeeyeen,
Dad badan ayaa aaminsan islamarkaana warbaahinta ka sheegay in Ikraan aaney dilin Shabaab, balse lagu eedeeyay isla nabad sugidda uu hogaamiyo Fahad Yaasiin, waxaana xogaha sheegayaan in uu sii laba kacleeyay khilaaf hogaanka hey’adda dhexdooda ah gaar ahaan Fahad, Kulane Jiis iyo Cabdullahi Dheere.
Korneel Cabdullahi Daahir oo ku magac dheer Cabdullahi Dheere ahna taliyaha dabagalka ayaa todobaadyadii u danbeeyay ku daba jiray qaabka loo dilay Ikraan Tahliil, waxaana aad ay isugu dhaceen Fahad iyo Cabdullahi Kulane oo ka biyo diidanaa dabagalka uu waday Cabdullahi Dheere.
Cabdullahi Dheere ayaa ka agdhaw Ra’iisal wasaare Rooble waxaana ay saraakiisha xogta bixiyay sheegeen inuu isagu ka danbeeyay jawaabta ay Shabaab iskaga fogeeyeen dilka Ikraan.
Khilaafka hogaanka NISA oo lala eegay kiiska culus ee ay dhex dabaalanayaan waxaa uu quus gelinayaa xaaladda dalka.
Xubnaha saraakiisha ah oo magacooda diiday in la baahiyo waxay sheegeen in Rooble iyo Cabdullahi Dheere ka go’an tahay in meel adag looga soo haro kiiska wareerka badan ee kooxdii lagu eedeeyay iska fogeysay.
Waxay intaas ku dareen in Korneel Cabdullahi uu fashiliyay heshiis ay hogaanka kale ee NISA ku doonayeen in Shabaab ku sheegtaan dilka Ikraan Tahliil, waxaana la tilmaamay in Cabdullahi Dheere uu kooxda u sheegay in aaney sheegan karin xitaa hadii lacag la siiyo,
Tani waxay jidka u sii xaareysaa sax ahaanshaha wixii waayahan lagu eedeynayay sirdoonka Soomaaliya ee ah in ay ku milmeen Al-Shabaab.
Fahad iyo Farmaajo oo uu wehliyo Kulane Jiis ayaa la kulmaya sida la tilmaamay dagaal ay ku hayaan Korneel Cabdalla oo muddo badan ku aragti ahaa iyo Ra’iisal wasaare Rooble.
Beesha Caalamka, mucaaradka Soomaaliya, iyo in badan oo bulshada rayidka kamid ah ayaa xukuumadda Rooble uga fadhiya gungaarka dilka Ikraan, iyo tilaabooyinka ay qaadayaan.
Article horeXOG:-Ikraan Tahliil oo gacanta u gashay Al-shabaab iyo halka lagu hayo.
Article socoda Fashil ku yimid dhex dhexaadinta Rooble iyo Farmaajo